Shinlay: လှည်းတန်း။ ၂၀၁၂
Posted by Shinlay at 21:22
ဝင်းဆံသ၊ ပြုံးပန်းတစ်ရာ၊ ဝင်နီ စတာတွေတော့ မှီလိုက်သေးတယ် မ,ရှင်လေး...၊ ကျနော်က ဆယ်တန်းတုန်းက လှည်းတန်း ဂုံးတံတားနားက ဆရာကိုတူးဆီမှာ Physics နဲ့ ဆရာဦးလှမြင့် ဆီမှာ သင်္ချာကျူရှင် တက်ခဲ့တာပါ...။
တချိန်တခါက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ခြေရာချင်းထပ်ခဲ့တဲ့ လှည်းတန်းကို သတိရတယ် :D
နံမယ်ကြီးတဲ့ အိမကျောက်ကျောကောပေါ့ဗျာ (ေ၇းတဲ့လူတွေအားလုံး ထိပ်စည်းက လေးနဲ့စတဲ့သူတွေမှန်းသိသွားကြတာပေါ့ဗျာ..ဟဟ)
21 September 2012 at 01:52
ဘီးကလေးနဲ့ ဒိန်ချဉ်ဆိုင်(တွန်းလှည်းလေးနဲ့ လေ)
လိပ်ပြာတောင်ပံရှေ့ မှာ ညနေဖက်ရောင်းတဲ့၊
အစ်မက တကယ့်ကို လှည်းတန်းသူ စစ်စစ်ပဲ...း)
ဇွန်က လှည်းတန်းဆိုရင် စာပေလောက စာအုပ်ဆိုင်လောက်ပဲ ကျွမ်းဝင်တာ။ အိမ်နဲ့လည်းဝေး၊ တက္ကသိုလ်လည်း မတက်ဖြစ်ခဲ့တော့ လှည်းတန်းဆိုရင် တကူးတကသွားမှ ရောက်တဲ့ နေရာလိုကို ဖြစ်နေတာ။
ဒါပေမယ့် အစ်မရေးတာတွေ ဖတ်ပြီး လှည်းတန်းပုံရိပ်ကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တယ်။
လှည်းတန်းမှာ ကျွန်မလည်း ကျင်လည်ခဲ့ဖူးတယ်၊
လှည်းတန်းနားက အဆောင်တွေမှာ နေခဲ့ဖူးတယ်၊
စတူဒီယို ဒီ ထမင်းဆိုင်
D Mate စာအုပ်ဆိုင်
ကိုညီရေ.. ကိုတူးဆီမှာစာသင်ဖူးပါတယ်။ ကိုတူးအဖေ
ဆရာကြီးဦးအောင်ဖေညွန့်ဆီမှာဆိုပါတော့။ ကျမနေတဲ့နေရာ က အရင်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းနားဆိုတော့
စူးနွယ်ရေ... လှည်းတန်းဈေးပတ်လွန်းလို့ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေက
တောင် မျက်နှာတွေသိနေပြီ။ လွမ်းတယ်နော်။
Ko9ရေ.. အိမကျောက်ကျောကလည်းသူ့ တစ်ခေတ်ပဲ။
ဟုတ်ပါရဲ့ ထိပ်စည်းက လေးနဲ့တွေတောင်ရှိနေပြီ။
ဆီချက်ဆိုင်က ကျမတို့ စားနေကျပဲ။
ဒေါ်အေးကြင်ဆိုင်ကတော့ မိသားစုတခါတလေထွက် စားလေ့ရှိတဲ့ဆိုင်ပေါ့။
ဇွန်...နောက်တခါကြုံရင်သွားလည်လေ။ စာပေလောက ဆိုရင်လှည်းတန်းရဲ့ ခေတ် သစ်ပိုင်းထဲရောက်ရောမယ်။
အပြုံးပန်း။ DMate, King and Queen;....
အဆောင်တွေ၊ ဂီတာပြီးညညသီချင်းဆိုကြတဲ့ သူတွေ၊
ရန်ကုန်လွမ်းနေသူမို့ မရှင်လေးရဲ့ ရန်ကုန်ပြန်ပိုစ့်တွေကို သေသေချာချာဖတ်သွားပါတယ်။
ဆကာကြီးမုန့် ဟင်းခါး ဆိုင်ရောကျန်သေးတယ်လေ။ ဆု တခွန်းတိုက်ကပျံ့ လွင့်လာတတ်တဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကြိတ်လိုက်တဲ့ ကော်ဖီနံ့ လေးလဲသတိရတယ်။
မယု... ဆကာကြီးမုန့် ဟင်းခါးနဲ့ ပဲကြော်..
ဆုကော်ဖီနံ့ က အခုထိမွှေးနေတုန်း
ပါ။ ဒီနေ့ မနက် ဆုကော်ဖီသောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မရှင်လေး။ မဖတ်ရသေးတာတွေ အကုန်လာဖတ်သွားပါတယ်။
လှည်းတန်းမှာ ကျွန်မလဲ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ကိုညီလင်းသစ်ပြောတဲ့ ကိုတူး၊ ဆရာကြီး ဦးအောင်ဖေညွန့်မှာ physics ကျူရှင်ယူခဲ့ပါသည်။ အမေတို့ရုံးက စိုက်ပျိုးရေးမှာဆိုတော့ အဲဒီနားမှာလဲ သင်္ချာ ကျူရှင်ယူပါသည်။ ၀ဂ္ဂီလမ်းဟု သတိရပါသည်။
ဆွိ... ဆရားကြီးရဲ့ physics ကျောင်းမှာကျောင်းတက်
We all are Hledann lwun thu.There's so many footprints at evening in Hledann.I bought my 1st house at Waggi Yeikthar street.The picture you painted was our old precious memory till around 1995.
It is true Gyidaw.. I went away from Hledan in 1999.
အမရှင်လေး ရေးထားတဲ့လှည်:တန်:က ဇင်မင်းဆံပင်ဆိုင်က ခိုင်တို့မေမေ ဒေါ်ရင်ရင်စိန်ရဲ့ဆိုင်ပါဘဲ အခုဒီနေ့မနက်၈နာ၇ီမှာ ခိုင့်ကိုမေမေကအခန်းတံခါးခေါက်ပြီး ၀မ်းသာအာ:ရသူ့ iPad ကလေးကိုင်ပြီး အမရှင်လေးေ၇းထာ:တဲ့ လှည်:တန်းနဲ့သူ့ရဲ့ ဇင်မင်းဆံပင်ဆိုင်နံမည်ကိုလာပြရှာတယ် အမရေ:ထာ:တာလေ:ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးငိုချင်လာတယ် လွမ်းလိုက်တာ ငယ်ငယ်ကကြီ:ပြင်:ခဲ့တဲ့ နေရာဟောင်း ဆိုင်ဟောင်း ဒေသဟောင်းလေးကိုလွမ်:ဆွတ်သတိရမိပါတယ်အမရယ်။ ခိုင်နံမည်က ခိုင်မင်းမင်းဘုန်းပါ ခိုင့်မှာအမအကြီးတယောက်ရှိတယ် သူကဇင်မိမိဘုန်းပါ မေမေနဲ့ပါပါက ဆံပင်ဆိုင်ကို သမီးနှစ်ယောက်နံမည်နဲ့ "ဇင်မင်း"ဆိုပြီးပေးထားတာလေ။ မေမေ ပါပါ နဲ့ခိုင်က NewYork,USA မှာDecember 1985 ကထဲကနေတာဆိုတော့ လှည်:တန်:နဲ့ဝေးကွာသွားတာ နှစ်ပေါင်း၂၈ နှစ်တောင်ရှိနေပါပြီ ဒါပေမဲ့ကိုယ်နေခဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကိုသတိယတုန်းပါဘဲ အမစာထဲကပြောထားတဲ့ကျူရှင်ကျောင်းတွေလဲ ခိုင်၁၀တန်းတုန်းကတက်ဘူးပါတယ် ခိုင်က ၁၅နှစ်သမီးနဲ့ရန်ကုန် မြန်မာပြည်ကြီးကခွဲခွါလာခဲ့ရတာပါ st. Augustine အထက်တန်းကျောင်းမှာ ၈တန်း ၉တန်း၁၀တန်းတက်ခဲ့တာလေ အမရှင်လေ:ရဲ့ ဟင်းချက်web page ကိုမေမေကနေ့တိုင်းသူ့ရဲ့ facebook acct နံမည်ကတော့ yinyin sein ကနေကြည့်နေကြလေ ခိုင်လဲအခုမှ မေမေပြလို့ကြည့်ဘူးသွားတာပါ ခိုင့်FB acct နံမည်ကတော့
Joy Khineminminphone Lim (DrLim) အမကိုခိုင်နဲ့မေမေရဲ့FB ထဲမှာရပ်ဆွေ၇ပ်မျိုးတွေမို့ friends အနေနဲ့ add ကြည့်ပါဦ:မယ်
အဲဒါတွေ တောင် သိတယ်ဆိုရင် အိသက်ထက် ကြီးပုံရတယ် အမ ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ပြန်တောင် ပြန်ချင်လာတယ်